I Anjin ingcolisa imifula - The Zimbabwean
I Anjin ingcolisa imifula
Inkampani yokwemba indayimani, eye Anjin Investments isiyetheswe umlandu wokungcolisa imifula enjenge Odzi ngengcekeza evela emisebenzini yayo le.
Ingcekeza le ibikwa isigulise kakhulu izakhamizi lezifuyo ezisebenzisa amanzi avela kule imifula. Iqula lenkokheli ze European Union ebelikhokhelwa ngummeli walinhlanganiso kuleli, u Aldo Dell’Ariccia, livakatshele e Marange ensukwini ezimbalwa ezidluleyo lathi likhathazekile kakhulu ngokungcoliswa kwemvelo lokhu ngesikhathi likhuluma losibalukhulu wase Manicaland, uChris Mushohwe. Abe Environmental Management Agency labo benze imihlangano engapheliyo loMushowe ngemva kokuba iEMA yethusele ukumisa imisebenzi ye Anjin eeChiadzwa kulandela ukwehluleka kwayo ukulandela imithetho yezemvelo.
“Syibhekile imisebenzi yokwemba le. Amanzi kufanele asetshenziswe kakutsha kulokuthi ekelwe engena emifuleni. Ngithola imbiko evela ku EMA nyanga zonke isithi sichwayisise ngokugugudeka kwemvelo njalo sikwenqabele,” kutsho uMushowe ngesikhathi somhlangano.
Izakhamizi zalindawo zona zethese iAnjin umlandu wokungcolisa imifula, zithi ziqale ukuthola imikhuhlane ngemva kokunatha amanzi la angcolileyo ngomnyaka ka 2009.
Omunye wabakhokhela umphakathi, u Aleck Mutsago, uthe inkomo ezintathu zafa kuviki ezimbalwa ezedlule, kukanti omunye usomawofisi we EMA yena uthe amankampani embayo akhetha ukukhokhela imali yezijeziso kulokuthi enqabele ukungcolisa amanzi.
Omunye omkhulu weAnjin, uMunyaradzi Machach, ukuvumile ukuthi enye ingcekeza ingena emifuleni ngemva kokufa kwentanka.
“Nxa konke kulungile, amanzi avela ku Odzi ayasetshenziswa kutsha, hatshi ukuvulelwa emfuleni Itanka yethu ibifile, kodwa sesiyilungisile.”
Kusnjalo, ababona ngezemvelo bona bathe amankampani awalandaba lemithetho yezemvelo, abuye akhuthaza ukuthi kumele kujeziswe abonayo. “Asingeke sagoqa izandla zethu lapho imvelo ichithwa kanje ngamankampani la,” kutsho uMike Pullen, omunye wezemvelo.